चीनियाँ नाकाबन्दीले सीमाका जनताले आफन्त भेट्न पनि पाएनन् – Halkhabar kura
१२ माघ २०७७, सोमबार १०:४९
०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालको चीनतर्फको सवै नाकामा समस्या छ। सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र रसुवागगढी नाकामा पनि अवरोध कायमै छ। सुरुका दिनमा भौतिक संरचना र सडक सञ्जाललाई देखाएर आयात–निर्यातमा र आउजाउमा कडाई गरेको चीनले कोरोना संक्रमणपछि त्यसमा अझै कडाई गरेको छ ।
चीनियाँ अधिकारीहरुले सुरुकै दिनदेखि तातो पानी भन्सार सञ्चालन गर्न नचाहेको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पा वताउँछन् । स्थानीयको दवावका कारण संचालनमा आएको नाका पनि नाम मात्रको भएपछि सर्वसाधारणलाई जिविका चलाउनै समस्या भएको उनले वताए ।
नाकामा अवरोध गरेर चीनले नेपालीलाई हेपेको उनको विश्लेषण छ । तिब्वतको खासामा वसोवास गर्ने चीनियाँ नागरिक र नेपाली नागरिकको सम्वन्धका कारण नाकामा समस्या उत्पन्न गरिएको उनले वताए । ‘केहि समय अघिसम्म खासामा चीनियाँ नागरिकको एउटा वस्ति थियो। अहिले त्यो वस्ति उठाएर करिव ८ सय किलोमिटर टाढा सिगात्सेमा पुर्याईएको छ’ उनले थपे–‘उनीहरु खासा आउन चाहिरहेका छन्, तर दिएको छैन । नेपालीहरुसँग उनीहरुको पारिवारीक सम्वन्ध छुटाउनकै लागि अहिले नाका वन्द गरिएको हो ।’
तिब्वतमा चीन विरोधी गतिविधि वढेकाले त्यहाँको वस्ति उठाएर नाका वन्द गरिएको हल्ला चाहिँ आफुहरुले सुनेको शेर्पा वताउँछन् । ‘हाम्रा धेरै चेलीवेटीको उता विवाह भएको छ। उताका पनि यता आएका छन’ उनले थपे–‘आफन्त भेटघाटमै समस्या आएपछि हामीले पनि त्यस विषयमा चासो राख्यौं। सुन्नमा आए अनुसार स्वतन्त्र तिब्वतको गतिविधि वढेकाले त्यसो गरिएको रहेछ ।’
चीनले जे सुकै भनेपनि नेपालमा भने चाईना विरोधी कुनै गतिविधि नभएको उनले वताए । विभिन्न वहाना वनाएर चीनले नेपालीलाई हेप्न र पेल्न खोजेको शेर्पा वताउँछन् । यस विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु वोल्नु पर्ने उनको माग छ ।
भारततिरको नाकामा सामान्य समस्या आउँदा हल्ला गर्ने नेता, सांसद र मन्त्रीहरु चीनतर्फको नाकामा यति ठुलो समस्या आउँदा पनि नवोल्दा भने आफुलाई आश्चर्य लागेको उनले वताए ।
७÷८ महिनाअघि नेपालका लागि चीनियाँ राजदुत स्थलगत निरिक्षणका क्रममा तातो भन्सार कार्यालय पुगेका थिए । सो समयमा भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालयले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी रोजिरोटी र आफन्त भेटघाटमै समस्या भएको सुनाएका थिए । नाका अवरोधका कारण मान्छे विस्थापित हुन थालेको र आफन्त भेटघाटमा समस्या भएको विषयमा स्थानीयले राजदुतलाई नै सुनाएका थिए ।
तर, राजदुतको ब्यवहार सकारात्मक देखिएन । शेर्पा भन्छन–‘स्थानीयका समस्या सुनेपछि त्यस विषयमा पहल गर्ने वाचा गरेर हिडेका राजदुतले कुनै पहल नगर्नु भनेको वास्ता नगरेकै हो। सवै कुरा वुझेको मान्छेले पनि वेवास्ता गरेपछि अरुले गरेनन् भनेर कतिदिनसम्म चिच्याउँने ?’
तातोपानी भन्सार कार्यालयमा हाल एक सय कन्टेनर जाँचपास र ३ सय कन्टेनर स्टकमा राख्न सक्ने क्षमता छ । तर, अहिले दिनमा २÷३ वटा कन्टेनर मात्रै आउने गरको प्रमुख भन्सार अधिकृत लालवहादुर खत्री नै वताउँछन् ।
०७२ सालको भुकम्पले भत्काएका संरचना वनाउन समय लागेको र संरचना सहज वन्दै गएपछि लोसार पर्व र ०७६ सालको पुषदेखि कोरोना संक्रमणका कारण ४ महिना नाका पुर्ण रुपमा वन्द भएको वडाध्यक्ष शेर्पा वताउँछन् । त्यसपछि खुलेको नाका नाम मात्रैको संचालनमा रहेको उनले वताए ।
Previous देशले न राजनीतिज्ञ पायो न राम्रो पार्टी नै, अनि कहाँबाट भ्रष्टाचार रोकिन्छ ? (भिडियोसहित)
Next बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपविरुद्ध नबोल्ने प्रचण्ड, नेपाल र ओली या कांग्रेस सबैको साझा एजेन्डा हो ! (भिडियो)